Baro Sida Loo Sameeyo Maqaallada Qoraalka Lacagta ▷ ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
January 22, 2019 0 comments 1322
Maanta waa suurtagal lacag ka dhig qorista qodobbada raaxada miiskaaga, iyo xawaaraha shaqadaada. Waa goob ganacsi oo caan noqotay muddooyinkan dambe fursadaha ay bixiso awgood.
Akhri akhriska oo waxaad ka heli doontaa adduunka oo dhan fursadaha aad ku qabsan karto oo aad lacag kula kasban karto Qoraalka qoraalka.
Awoodda ay bixiso internetka si loogu kasbado lacag qorista maqaallada
Internetka ayaa soo saaray ganacsiga cusub ee ganacsiga waxayna u ogolaatay xirfado badan iyo xirfado inay iskood isu bartaan. The maqaal qoraal ah Waa hawlo aan ku dhalanayn teknolojiyad, laakiin waxay heshay horumar xiiso leh.
Muuqaalka ugu weyn ee shabakada shabakadaha waa exaddid xuduudaha jirka iyo xiriir waqti dhab ah dhexmara asxaabta. Tani waxay fursad siisay horumarinta howlaha waxqorista si ka fudud, taasoo isu keenaysa isweydaarsiga macmiilka iyo alaab-qeybiyaha. Waxaan sidoo kale kuu sheegnaa sideed ugu heli kartaa gaadiid badan boggaaga internetka.
Aynu hoos ku aragno dhammaan fursadaha ay ku bixin karto internetka Lacag ka dhig qoraalada qodobbada oo dakhligaaga kordha:
Toos u wada xiriir macaamiisha-bixiyeyaasha
Waxaa jira barnaamijyo isu keena macaamiisha suurtagalka ah ee u baahan adeegyada qorista iyo bixiyeyaasha adeeggan. Geedi socodka kulanka u dhexeeya daneeyayaasha waa mid fudud, oo aan lahayn hab maamuusyo waaweyn, oo leh heer sare ixtiraam.
Goobahaan isgaarsiinta toosan waxay soo saareen koodhadh anshaxeed falalka kuwa ka qeybqaadanaya, iyagoo dhisaya kalsooni. Kaliya waa inaad doorataa goobta saxda ah oo aad bilawdaa inaad dhex gasho waxaad arki doontaa sida ay u fududahay uguna ficil tahay.
Muunad tusaalayaal ah ayaa la heli karaa wakhti kasta
Waad ilaalin kartaa faylalkaaga muunad qaadka ah oo casriyeysan oo la heli karaa wakhti kasta, adigoon dadaal badan ama maalgelin qaali ah gelin. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad sii weynaato wax soo saar iyo u naxariiso macaamiishaada mustaqbalka, sidaas darteedna kordhi macaashkaaga.
Jadwal dabacsan oo ku habboon baahidaada
¡Xaqiiqdii tani waa shaqada ugufiican.! Waxaad dhigtaa jadwalkaaga shaqada, iyo heerka wax soo saarka aad rabto inaad horumariso. Adigaa iska leh waqtigaaga, oo go’aaminta mugga shaqada iyadoo loo eegayo helitaankaaga iyo heerka jawaabtaada.
Qorshe dakhli dheeri ah oo ku saleysan waxa aad rajeynayso
Samaynta lacag qorista qodobbada ayaa shaki la'aan ah xulashada ugu fiican kuwa raba Kordhi dakhliga hal abuurka. Waxay kuxirantahay mugga shaqada aad aqbasho, heerkaaga jawaabta iyo tayada shaqadaada, waxaad gaartaa rajooyinkaaga.
Saadaalin xirfadeed oo laga sameeyo qaybaha caalamiga ah
Markaad la macaamilto qoraalo qalab qoraal ah, waxaad hormarineysaa adeegyadaada gudaha. Iyo sida uu qabo meelaynta dabiiciga ah ee bogga oo aad u qorto, waxaad ku yeelan doontaa saadaalin weyn.
Dabcan, saadaalinta xirfadleyda ee aaggan, waxay ka dhigan tahay dakhli badan laakiin isla waqtigaas, waxay u baahan tahay shaqo iyo u-go'naan
Cusboonaysiinta joogtada ah
Qaybtan waxay u baahan tahay inaad la socoto isbeddelada qoraalka ee waaxda aad qoreyso. Waa inaadan kaliya ku cusboonaysiin naftaada waxyaabaha ku jira, laakiin sidoo kale gudaha xeeladaha SEO ee wax looga qabto xilligan la joogo.
Waxa ay tahay inaad maskaxda ku hayso intaadan bilaabin qorista maqaallada iyo inaad kasbato lacag
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad ogaato waa in wax walba oo halkan yaalaa ay ka mid yihiin xidhiidh guul leh oo u dhexeeya adiga iyo macmiilkaaga. Sidaa daraadeed, ka hor intaadan bilaabin aaggan, waa inaad tixgelisaa seddexdan arrimood ee aasaasiga ah:
Hesho lacag qorista qodobbada, waa hawl ay tahay in qiimaha lagu xoojiyo, badiyaa ixtiraamka iyo anshaxa. La macaamilida dadka badanaa aan shaqsiyan is aqoon, ayaa kor u qaadaya masuuliyada heerar sare.
Nuxurka qoraalka waa inuu ahaadaa dhab ah, joogto ah oo joogto ah, Marka waa in qoraaga la baro maadada. Marka qoraal la qorayo, waa in loo diyaariyo loona habeeyo qaab tayo leh.
Ka fogow shaqo-ka-fadhiisashada iyo shaandhayaasha ka leexiya qoraalka oo yareeya xiisaha akhristayaasha suuragalka ah.
Maaree wakhtiga waxyaabaha la keenayo wakhtiga lagu heshiiyay ee ka dhexeeya dhinacyada. Inaad waqtiga qabsato waxay kordhin doontaa sumcaddaada goobaha, waxayna kugu gaarsiineysaa inaad gaarto yoolal dhaqaale oo aad rabto.
U ogow ganacsadaha kugu jira inuu kasbado lacag qorista maqaallada
Mashruuc kastaa wuxuu leeyahay dhiirigelin taasoo noqon karta mid shucuureed, dhaqaale ama si fudud qayb uga mid ah shakhsiyadda qofka. Eeg fursado lagu abuuro lacag Waa tayo taas Waxaad ka dhigi kartaa inay ku dhacdo iyada oo la qorayo maqaallada.
Kuwani waa astaamaha ay tahay inaad lahaato iyo / ama awood si aad uga dhigto mashruucaaga macaashka mid wax ku ool ah adigoo qoraya maqaallo:
Waxqabadka iyo rabitaanka ah inaad dakhligaaga horumariso
Fahamka aqrinta ee aadka ufiican
Jecel inuu baadhitaan sameeyo oo ogaado meelaha aqoonta kaladuwan.
Maareynta luqadda aad go'aansato inaad ka shaqeyso sidii loo qori lahaa hab isku mid ah oo sax ah
Mar dambe ha sugin oo diyaar u noqo inaad bilowdo qaadista talaabooyinka lagama maarmaanka ah si aad ugu kasbato lacag qorista maqaallada. Haddii aad rabto inaad wax dheeraad ah ka ogaato isbeddellada xiisaha leh, hubi qodobbada ku jira balooggan diyaarna u noqo inaad guuleysato.
1 Awoodda ay bixiso internetka si loogu kasbado lacag qorista maqaallada
1.1 Toos u wada xiriir macaamiisha-bixiyeyaasha
1.2 Muunad tusaalayaal ah ayaa la heli karaa wakhti kasta
1.3 Jadwal dabacsan oo ku habboon baahidaada
1.4 Qorshe dakhli dheeri ah oo ku saleysan waxa aad rajeynayso
1.5 Saadaalin xirfadeed oo laga sameeyo qaybaha caalamiga ah
1.6 Cusboonaysiinta joogtada ah
2 Waxa ay tahay inaad maskaxda ku hayso intaadan bilaabin qorista maqaallada iyo inaad kasbato lacag
2.1 Amaanka xoojinta
2.2 Tayada content
3 U ogow ganacsadaha kugu jira inuu kasbado lacag qorista maqaallada
Ogow waa meelaynta websaydhada iyo SEO